Sawiro: Dibadbax Balaaran ayaa ka socdo Magaalooyin Waaweyne ee Dalka Itoobiya - Awdinle Online
Sawiro: Dibadbax Balaaran ayaa ka socdo Magaalooyin Waaweyne ee Dalka Itoobiya
October 23, 2019 (AO) – Saddex qof oo ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay Magaalooyin kala duwan ee dalka Itoobiya halka tiro shacab ah ay ku dhaawacmeen, sida dad goob joogayaal ah ay Warfidiyeenka dunida u sheegeen.
Dibadbaxyada ayaa looga soo horjeeday Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali.
Ilaa sedax qof oo ka mid ahaa dadkiii dibadbaxyada ka dhigayay magaalada Adama ayaa lagu dilay halkaas halka tiro kale ay ku dhaawacmeen magaaladda bariga ku taal ee Harar, sida ay xaqiijiyeen dad joogta joogey.
Halka saddex qof oo dibadbaxyaal ahna lagu dhaawacay magaalada Ambo oo dhacdo galbeed magaalada Caasimadda itoobiya ee Addis Ababa.
Bulshada dibadbaxyada dhigaya waxay tageero u muujinayay Jawar Maxamed oo ku eedeeyay dowladda inay ilaaladiisa kala noqdeen, xalisna geliyeen nabadgeliyadiisa shaqsiyadeed iyo mida taageeriyaashiisa.
Previous articleSawiro: Madaxweyne Farmaajo oo Kasoo Muuqdey Shirka Ruusha iyo Africa
Next articleIOM: Somalia’s 2.6m displaced citizens in need of water, shelter and health